अमेरिकाले परीक्षण गरेको कोरोनाको औषधि सफल भएको अमेरिकाको दावी, बिरामी निको भएपछि चारैतिर खुसियाली ! – Everest Pati
अहिले प्रचलनमा भएको एउटा औषधिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट निको पार्ने क्षमता भएको स्पष्ट आधार पाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। विश्वभरि अस्पतालहरूमा रेम्डेसिभिर नामक औषधिको प्रयोग गर्दा बिरामीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि विकसित भएका लक्षणहरू हराउने समय १५ दिनबाट ११ दिनमा झरेको देखिएको दाबी गरिएको छ। विश्वभर सं’क्रमितको संख्या बढ्दै गएको र आर्थिक वि’श्रृंख’लता नि’म्त्याए’को कोरोनाभाइरसको औ’षधिले परीक्षणका क्रममा धेरै राम्रो काम गरेपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ । औ’षधिको परीक्षण निकै सफल भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसको स’कारात्मक असर वा’लस्ट्रि’ट सहित विश्वको शेयर बजारमा देखिएको छ ।
अमेरिकी इ’पि’डि’मियोलो’जिस्ट डा ए’न्थोनी फ’चीले संवाददाताहरुसँग रे’मडे’सिभर औ’षधिको प्र’भाव र असर निकै उत्साहप्रद रहेको बताउनुभयोबताए । यो औ’षधि इ’बोला भाइरसका बिरामीका लागि भने असफल देखिएको थियो ।यही औ’षधि चीनको उहानका बिरामीमा परीक्षण गर्दा पनि त्यति सफल मानिएको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका वरिष्ट अधिकृत माइकल रायनले पछिल्लो नतिजाका बारेमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले परीक्षणको विस्तृत विवरण प्राप्त नहुँदासम्म आफूले यस बारेमा टिप्पणी नगर्ने बताए ।
यसबारे पूर्ण विवरण प्रकाशित भएको छैन। विज्ञहरूले यो कुरा पुष्टि भए उत्साहजनक हुने तर कोभिड-१९ का लागि यो रामवाण चाहिँ नहुने बताएका छन्। यसले मानिसहरूको जीवन जोगाउने, अस्पतालहरूमा चाप कम गर्ने र लकडाउन खुकुलो पार्न सहयोग गर्ने सम्भावना रहनेछ। इबोलाको उपचारको लागि रेम्डेसिभिर विकसित गरिएको थियो। यो एन्टीभाइरल औषधि हो र यसले शरीरमा भाइरसलाई बढ्न चाहिने एन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाउँछ। यो अध्ययन यूएस न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्शस डिजीजेजले गरेको र त्यसमा १,०६३ जनाले भाग लिएको बताइएको छ। तीमध्ये केहीलाई सो औषधि दिइएको र अन्यलाई नदिकनै उपचार गरिएको बताइएको छ। इन्स्टिट्यूटका प्रमुख डा. एन्थोनी फाउची भन्छन्, “तथ्याङ्कले रेम्डेसिभिरले निको हुने समय घटाउने स्पष्ट, महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक असर पारेको देखाएको छ।” यो परिणामले औषधिले भाइरसलाई रोक्न सक्ने देखाएको र कोभिड-१९ को उपचार गर्न सकिने ढोका खोलेको उनले बताए।
निधन को सम्बन्धमा औषधिले कस्तो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यो औषधि दिइएका व्यक्तिमा निधन दर आठ प्रतिशत र नदिइएकोमा ११.६ प्रतिशत रहेको बताइए पनि यो परिणाम तथ्याङ्कको आधारमा महत्त्वपूर्ण नरहेको बताइएको छ। कुन उमेर समूहका व्यक्ति, अन्य स्वास्थ्य समस्या र सङ्क्रमणको कुन अवस्थामा औषधि उपयोगी भन्ने पनि खुलाइएको छैन।
के भन्छन् विज्ञहरू? युरोपेली सङ्घमा भइरहेको औषधिको परीक्षण हेरेका प्राध्यापक महेश पाल्मर भन्छन्, “यो औषधि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुअघि केही अन्य कुरा पनि हुनुपर्छ।” “अधिकारीहरूले यो तथ्याङ्क र परिणामलाई हेरेर यसका आधारमा यसलाई अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसपछि सम्बन्धित देशका स्वास्थ्य निकायहरूले यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।” “यसका लागि यसको लामो समयको तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ र यसले जीवनरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।”
अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पिटर होर्वी भन्छन्, “हामीले पूरा परिणाम हेर्नुपर्छ। पुष्टि भए अद्भभुत हुनेछ र कोभिड-१९ विरुद्धको सङ्घर्षमा यो खुसीको खबर हुनेछ।” चीनमा यही औषधि प्रभावकारी नभएको विवरण ‘लान्सेट’ जर्नलमा प्रकाशित भएकै समयमा अमेरिकी दाबी सार्वजनिक भएको छ। चीनमा गरिएको अध्ययन चाहिँ बिरामीको अभाव भएकाले पूरा हुन पाएको थिएन।